Chelsea iyo Arsenal way badiyeen - BBC News Somali
Chelsea iyo Arsenal way badiyeen
Liverpool 2-2 Newcastle.
Liverpool waxay yeelatay 17 waxayna hoos ugu soo dhacday kaalinta 3aad oo waxaa meesha 2aad soo gashay Chelsea oo ay isku dhibco yihiin hase ahaatee ka goolal badan. Waxaana hoggaanka qabatay Arsenal oo 4-1 uga badisay kooxda Norwich oo ka mid ah kooxaha ugu hooseeya kala horreynta dhibcaha.
Waxayna kaloo Kooxuhu isaga hor yimaadeen:
Chelsea 1-4 Cardiff
Man Utd 1-1 Southampton Stoke 0-0 West Brom Swansea 4-0 Sunderland West Ham 1-3 Man City Manchester United maantana way sigatay oo iyada ayaa goolka lagu bilaabay hase ahaatee waxaa u suurta gashay inay ugu dambaysta ka badbaaddo guuldarrooyinkii toddobaadyadii dhowaa la soo dersay kooxda haysata horyaalka hadda loo tartamayo.
Waa toddobaadkii 8aad ee tartanka horyaalka kubbadda cagta ee Ingiriiska sanad-ciyaareedka 2013/2014. Weli lama saadaalin karo kooxaha kaalimaha safka hore geli doona iyo kuwa hoos u dhici doona midnaba.